Public Kura | » ‘पहिलो पटक नेपालमा क्यान्सरको औषधि उत्पादन भयो, अब निर्यात पनि गर्छौँ’ ‘पहिलो पटक नेपालमा क्यान्सरको औषधि उत्पादन भयो, अब निर्यात पनि गर्छौँ’ – Public Kura
‘पहिलो पटक नेपालमा क्यान्सरको औषधि उत्पादन भयो, अब निर्यात पनि गर्छौँ’
नेपालमा पहिलो पटक क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन सुरु भएको छ। टिजिग फर्मा प्राइभेट लिमिटेडले औषधि उत्पादन सुरु गरेको हो। औषधि उत्पादन गर्नकै लागि टिजिगले सन् २०१८ मा औषधि व्यवस्था विभागमा उद्योग दर्ता गराएको थियो। एलोप्याथी फार्मास्युटिकल्स अन्तर्गत यो उद्योग दर्ता छ। टिजिग फर्माले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग हुने १५ वटा औषधि उत्पादन सुरु गरेको छ। हाल पाँच वटा औषधिले बजार बिक्रिका लागि अनुमति पनि पाइसकेको छ। बाँकी १० वटा औषधिले बजार बिक्रिका लागि स्वीकृति पाउन बाँकी छ। उनका अनुसार क्यान्सरका यी १० वटा औषधि विशेषगरी निर्यातका लागि उत्पादन गरिनेछ। हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको उद्योग बनेपा–१ नालामा कुल १६ रोपनी जग्गामा स्थापना गरिएको छ। यसमा भारतको भेंकाटेसम अम्बाटीको लगानी रहेको छ। उहाँको लगानीमा एक कम्पनीसँग प्राविधिक सम्झौता गरेर आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनमा औषधि उत्पादन गर्न सकिएको टिजिग फर्माका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले बताएका छन्। उद्योग र औषधि उत्पादनका विषयमा कार्यकारी निर्देशक वैद्यसँग गरेको कुराकानीः
नेपालमा क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन गर्ने योजना कसरी बन्यो ?
कति समयको प्रयासपछि क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन संभव भएको हो ?
यो उद्योगमा लगानी, जनशक्ति, प्रविधि जस्ता विषयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
यो औषधि अब कहिलेदेखि बिरामीले पाउँछन् ?
नेपालमा क्यान्सरको औषधि कुन–कुन देशबाट आइरहेका छन् ?
नेपालको औषधि बजारमा भारत र बंगलादेशको ठूल्लो हिस्सा छ। बजारमा आफ्नो ठाउँ बनाउनकसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ?
क्यान्सरविरुद्धको यी औषधिको मूल्य कतिको सर्वसुलभ हुन्छ ?
सुरुवाती चरणमा कति औषधि बजार पठाउने तयारी हो ?
भारत औषधिमा आत्मनिर्भर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। त्यहाँका कम्पनीलाई भारतसरकारले धेरै सहयोग गरेको छ। नेपाललाई पनि औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले केही काम गरेको छ ?
क्यान्सरको औषधि उत्पादन गर्ने योजनादेखि उत्पादनसम्मको यात्रा तय गर्दा कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुभयो ?
स्वदेशी औषधि उद्योगको क्षमता विस्तार र आत्मनिर्भरताका लागि सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याए सहज र प्रोत्साहन हुन्थ्यो ?
मैले उद्योग स्थापना गरेपछि यसको विकासका लागि सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। नियमन गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई सहज पनि बनाइदिनुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै। मैले गरेको कामप्रति म निकै खुशी छु। जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ। पछिल्ला दिनमा म धेरैसँग यही विषयमा अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु। त्यसैले दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छु। by swasthyakhabar